Marble Mosaic - Morningstar Stone Co., Ltd.
3D Vato-rindrina vita sokitra sy kanto
Fametahana rano marbra
Fanaka-latabatra vita amin'ny marbra sy kanto
Column & Post
Ity dingana ity dia manan-danja ary manan-danja amin'ny dingana rehetra manaraka. Ny vato sy ny takela-bato goba toradroa dia akora miparitaka be izay vonona hanodinana azy. Ny fisafidianana ireo fitaovana dia mitaky fahalalana tsy miovaova momba ny endri-tsoratra sy ny fampiharana ary saina vonona handinika fitaovana vaovao. Ny fanaraha-maso amin'ny antsipiriany ny akora dia misy: ny fandrefesana ny fandrefesana & ny fisavana ny endrika ivelany. Ny fizotry ny fisafidianana ihany no vita tsara, ny vokatra farany dia afaka manambara ny hatsaran'ny hatsarany sy ny fampiharana azy. Ny ekipanay mpividy, manaraka ny kolontsain'ny orinasa mamokatra vokatra tsy misy kalitao, dia tena mahay amin'ny fikarohana sy fividianana fitaovana avo lenta. ▼
Fampahafantarana ny sary / famolavolana fivarotana
Ekipa mahay iray afaka mampiasa karazana rindrambaiko fanaovana sary isan-karazany miaraka amin'ny fahalalana ilaina amin'ny famokarana dia mampiavaka antsika amin'ireo mpifaninana maro hafa. Vonona foana izahay hanolotra vahaolana voavolavola kokoa ho an'ny famolavolana sy hevitra vaovao. ▼
Ny vokatra vita rehetra dia takiana mba hamory mialoha alohan'ny handaozana ireo zavamaniry fanamboarana, manomboka amin'ny takelaka voapaika ho amin'ny habeny ka hatrany amin'ny lasitra voasokitra ao amin'ny CNC sy ny maody amin'ny rano. Ity dingana ity dia matetika antsoina hoe dry-lay. Ny dry-lay mety dia atao amin'ny toerana malalaka sy foana miaraka amin'ny lamba fibre malefaka amin'ny tany sy ny tarehin-jiro tsara. Ireo mpiasanay dia hametraka ireo takelaka famaranana vita amin'ny gorodona araka ny fisokafan'ny fivarotana, izay ahafahanay manamarina:
1) raha mifanaraka amin'ny faritra na habaka ny loko;
2) raha ny marbra ampiasaina amin'ny faritra iray dia mitovy endrika aminy, ho an'ny vato misy lalan-drà, izany dia hanampy antsika hanamarina raha toa ka voatahiry na mitohy ny lalan'ny lalan-drà;
3) raha misy sombin-kazo tapaka sy sisiny azo amboarina na soloina;
4) raha misy sombintsombiny misy lesoka: lavaka, teboka mainty lehibe, famenoana mavo izay mila soloina. Aorian'ny fizahana rehetra dia zahana sy nasiana marika. Hanomboka ny fomba famonosana entana izahay. ▼
Izahay manokana fizarana fonosana. Miaraka amin'ny tahiry hazo sy tabilao mahazatra ao amin'ny orinasa misy anay, afaka manamboatra fonosana ho an'ny karazana vokatra tsirairay izahay, na mahazatra na tsy mahazatra. Ny mpiasa matihanina dia manamboatra fonosana ho an'ny vokatra tsirairay amin'ny alàlan'ny fandinihana: enta-mavesatra mavesatra ny entana tsirairay; ho anti-skid, anti-collision & shockproof, tantera-drano. Ny fonosana azo antoka sy matihanina dia antoky ny fanolorana azo antoka ny vokatra vita ho an'ny mpanjifa. ▼
Room 1103, Building B, Hengyuan Elite Mansion 1985, Mupu Road 101, Huli District, Xiamen, Sina